यौन शोषणको शिकार बनेका बलिउड अभिनेत्रीहरु « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
यौन शोषणको शिकार बनेका बलिउड अभिनेत्रीहरु
रिल लाइफमा अभिनेत्रीहरुसँग बलात्कार भएका धेरै घटानाहरु देखाइन्छन् । तर केही अभिनेत्रीहरु भने रियल लाइफमा नै बलात्कारको सिकार भएका छन् । कलिलै उमेरमा यौन शोषणको शिकार भएका अभिनेत्रीहरु सघर्ष गर्दै बलिउडमा स्थापित गराउन सफल भने भएका छन् । केही यस्ता बलिउड अभिनेत्रीहरु रहेका छन् जसले आफ्नो कालो बिगतको पर्दाफास गरेका छन् ।
बलिउडमा काम गर्ने सबै मानिसहरुको नियत सफा हुदैन भन्ने धेरैको भनाइ पनि यहाँ चरितार्थ हुन्छ । फिल्मका लागि काम दिलाइदिन्छु भन्दै सेक्सको प्रस्ताव राख्नेहरुको संख्या पनि उस्तै रहेको छ । केही बलिउड अभिनेत्रीहरुको बालअवस्था निकै दुखद रहेको छ । उनीहरु चायल्ड अब्युजको शिकार भएका छन् ।
उनीहरु आफ्नै नजिकका नातेदारहरुबाट शारिरीक तथा मानसिक रुपमा शोषणमा परेका छन् । केही अभिनेत्रीहरु त शिक्षकहरुबाट यौन शोषणमा परेका छन् । केही अभिनेत्रीलाई त शोषण भनेको के हो समेत थाहा नहुने अवस्थामा समेत यस्तो दर्दनाक अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक । गोरुले दुध दिएको समाचार पढ्दा जोकसैलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । तर गोरुले
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणले विश्व नै त्रसित बनिरहेका बेला यतिबेला मास्क नलगाउने ब्यक्ति कमै मात्रामा
अन्तरिक्षमा समेत पानी भालू बाँच्न सक्ने वैज्ञानिकको निष्कर्ष
काठमाडौँ । पानीमा रहने भालुको बारेमा कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? जुनै परिस्थिति, मौसम र
फोटो स्टुडियोको जागिर छाडेर जुत्ता पालिस गर्न थालेका युवक बने लखपति, लाखौँ रकम छ बैँकमा
एजेन्सी । जुत्ता पालिस गरेर लाखौँ कमाएको कहिल्यै देख्नु वा सुन्नु भएको छ ? अमेरिकाको